Oh.. My Blog!: March 2008
PhotoDiary ( II )
ဟိုး.. ရှေးရှေးမတုန်းတုန်းက နေတက်တဲ့မြို့ကြီး ရဲ့ အိုင်တီရှိုးပွဲတစ်ခုပေါ့ကွယ်.. တောသားမြို့ရောက် မြို့ရောက်နောက်ကျ လူ့သောက်ဂွ.. ဆိုသလို.. ယောင်လည်လည်နဲ့ ရောက်သွားခဲ့တယ်.. (အဖြူကတမျိုး အနီကတမျိုး.. အဟွတ်.. )
အရောင်အသွေးတွေဆုံတဲ့ လိပ်ပြာလေးတွေတွေ့တော့ ငန်းမိ.. အဲလေ. ငေးမိသည်ပေါ့.. ( စိတ်ကြီးပုံက ဒီလိုတဲ့ ) စိတ်မှာထကြွ လို့ သိက္ခါကျရင် ကျပါစေတော့ဆိုပြီး မှန်ဘီလူး တွေနဲ့ ရိုက်နေတဲ့ လူတွေကြားထဲမှာ.. မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး.. ဖုံးကင်မရာလေးနဲ ရိုက်မိပါတယ်…(လှည့်ကိုမကြည့်တာဗျာ) မှန်ဘီလူးကြီးတွေကို ပဲ ကြည့်ပြီး လိပ်ပြာလေးတွေက ပြုံးပြုံးပြကြသတဲ့..
( တောက်.. ဟိုလူ့လက်ထဲက အယ်လဖာ. ဘာ. ဆိုလည်း မသိဘူး.. အဲ့ဒါကြီးကို ဇွန်းတပ်ပြီး ချိန်ချက်နဲ့တင် လိပ်ပြာလေးတွေ လွင့်ထွက် သွားအောင် ရိုက်ပြစ်လိုက်ချင်တာ.. ဟင်း. ) အဲ့လိုနဲ့ .. တင်းသွားပြီး .. ဟဲ့ အယ်လဖာကောင် နင်က ဘယ်လောက်တန်လို့လည်း ဆိုပြီး သွားကြည့်သောအခါ (ဟိုက် .. မွေးကတည်းက ရှာခဲ့ဘူးတဲ့ ပိုက်ဆံအားလုံး ပေါင်းရင်တောင် မှီနိုင်မယ် မထင်ဘူး.. ဟူး) ကဲ.. မဖြစ်ခြေဘူး ရသေ့စိတ်ဖြေ ဆိုပြီး အပေါ်ထပ်က မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ဘယ်သူမှ မသုံးတော့တဲ့ ဖူဂျီဘွားဘွား ကို မျက်စိမှိတ်ပြ စိတ်ကိုလုံးလုံးချပြီး ပေါင်းကြသင်းကြ ဘို့ ပြောပြ.. အဲ့လိုနဲ့ပဲ အရဲစွန့် ၀ယ်လိုက်ရ တော့တယ်.. အဲ.. ဖူဂျီဘွားဘွားက လူရာတော့ နည်းနည်းဝင်သား.. ဟော့.. ကြည့်တယ်.. ကြည့်တယ်.. အမြန်ရိုက်လိုက်တယ်..
အား… အကြည့်လက်နက်က ပြင်းတယ်ကွယ်.. လက်ထဲက ဟာကြီးနဲ့ ပြစ်လိုက်တာကမှ သက်သာဦးမယ်.. အမ်.. :D
Posted by Tesla at 8:25 AM | Links to this post
PhotoDiary ( I )
မြန်မာဟေ့လို့ ဟစ် ကြွေး ခဲ့ ဘူး တဲ့ အားမာန်များ….
Posted by Tesla at 9:10 AM | Links to this post
မှာ T-Shirt Design လေးတွေအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဘို့ အကြမ်းလုပ်ထားတာတွေပါ.. တေးရေးဆရာ ကိုမြင့်မိုးအောင်ရဲ့ ဟိုးတုန်းက အိုင်ဒီယာ လေးတွေကို ဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြံဥာဏ်ပေးလို့ ရအောင် တင်ထားလိုက်တယ်.. ဒီဘလော့ထဲက စာတွေ ပုံတွေဟာ ဘယ်တစ်ခုမှ ဘယ်နေရာမှာမှ ကော်ပီမရိုက်ခဲ့ပေမဲ့.. ဒီပုံလေးတွေ အတွက်ကတော့ ကော်ပီတွေ ရိုက်လိုက်ပါတယ်… :)
Posted by Tesla at 7:56 AM | Links to this post
Free From Two Dimension..
ဒေါက် ဂလောက် ဂလောက်
အံစာတုန်း တခုရဲ့ အမိန့်ကို နာခံအပြီးမှာ
ရွှေရောင် တဖြတ်ဖြတ် ငွေရောင်တလက်လက်
တောက်ပပြိုးပြက် နေတဲ့ အတုန်းလေးတွေကြားထဲမှာ
မွဲညစ်နေတဲ့ ကြယ်သီးစုပ် တစ်လုံးအဖြစ် ကစားပွဲထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ရတယ်။
ရွေ့နေခြင်းသက်သက်ဟာ သူ့ရဲ့ဘ၀ ဖြစ်လာတဲ့အခါ
တချို့လှေခါးလေး တွေ ထောင်တားတဲ့ အကွက်တွေမှာ
အပေါ် ရောက်နိုင်မှာ ကိုသတိထားမိတဲ့အခါ
တုန်တုန်လှုပ်လှုပ် လည်း ဖြစ်ဘူးခဲ့တယ်။
အံစာတုန်းရဲ့ ရက်စက်တဲ့ ကျကွက်တစ်ခုမှာ
ကစားပွဲထဲမှာ ရှိတဲ့ အရှည်ဆုံး မြွှေတစ်ကောင်ဟာ
သူ့ကို တဖြစ်ဖြစ်မြည်အောင် ၀ါးမြို ပြစ်လိုက်တယ်..။
အခု. သူ့ရဲ့ အဆင့်တစ်မှာ တင် ပတ်ချာလည် နေပြန်တယ်..။
စထွက် အကွက်က ပြန်ဖြတ်ဖို့ ဘယ်လိုအင်အားမျိုး
အံစာတုန်းခွက်ကို သူ့လက်နဲ့ ကိုင်ဆုပ်ပြီး
အံစားတုန်းတွေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဂဏန်း
မီးပုံပျံ အရုပ် တစ်ခုကို..
အံစာတုန်းရဲ့ အမိန့်နာခံမှုတွေအောက်က လွတ်မြောက်တဲ့အခါ…။
Posted by Tesla at 10:37 AM | Links to this post